Maamulayaasha mobilada ee COD ee ugufiican (Nov. 2020) - Waa Inay Akhristaan - Qalabka
5 Kumbiyuutarrada COD ee ugu Fiican - Waa Inay Akhristaan
Wicitaanka waajibaadka waa mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan adduunka oo dhan, waxayna ahayd mid horseed u ah tirada dadka ciyaara. Waxaa la bilaabay sanadkii 2003. Markii hore, waxaa lagu ciyaari jiray kaliya kombiyuutarada iyo Laptops, laakiin ka dib markii ay soo if baxeen taleefannada casriga ah, waxaa loo arkay baahi aad u daran nooca mobilada. Maaddaama taleefannada casriga ahi aysan lahayn kumbuyuutar dhammaystiran oo aysan sahlaneyn in loo isticmaalo shaashadaha taabashada yar yar ee dhaqdhaqaaqa degdegga ah inta lagu jiro ciyaar sida wicitaanka waajibaadka.
Marka, ilaaliyayaasha mobilada waxaa loo ikhtiraacay inay ka dhigaan khibradaada ciyaaraha taleefanada gacanta casriga ah mid raaxo leh, madadaalo leh, oo dhameystiran. Kontaroole gacanta lagu qaadan karo oo loogu talagalay ciyaaraha ayaa kuu oggolaanaya inaad ku xakameyso gameplay jilicsanaanta oo sahlan oo lagu ilaaliyo badhamada. Waxay ka dhigayaan gameplay fudud oo wax ku ool ah.
The Best COD Kantaroolayaasha Mobile-Top 5 Liiska
Waxaa laga yaabaa inaad raadineyso xakameyn ciyaarta si aad u ciyaarto Call of Duty. Marka, waxaan u maleynay inaan ku siino baaritaan deg deg ah mid ka mid ah ilaaliyeyaasha moobiilka ugu fiican ee laga heli karo suuqa si loogu ciyaaro COD taleefannada casriga ah.
1. BEBONCOOL Maamulaha Mobilada
Waa mid ka mid ah kantaroolayaasha mobilada ugu fiican ee la heli karo si loogu ciyaaro wicitaanka waajibaadka casriga ah. Waxay ku habboon tahay labada Android iyo IOS oo waxay la timaadaa 12 badhamada xakamaynta khariidadaha dhaqdhaqaaqa. Waxaad kuheli kartaa khibrad aad u tiro badan oo qosol badan inta aad isticmaaleyso qalabkan casrigaaga ah ee lagu ciyaaro 'CoD'.
Dhisid tayo sare leh
Khibrad ciyaaraha Premium
Ul analog weyn
Ma jiro tilmaame batari
2. GameSir G6 maamusha Mobile
GameSir G6 waa xakameyn hal gacan ah, kumbiyuutar wireless ah oo loogu talagalay in lagu ciyaaro ciyaaraha taleefannada casriga ah. Way ku cusub tahay suuqa waxayna leedahay qeexitaanno cusub. Waxay kaa caawineysaa inaad ciyaarto halka aad ka ilaalinaysid xakamaynta iyo taabashada shaashadda labadaba.
Tobanka badhan ee kontaroolada
Khibrad ciyaareed weyn
Ma taageeri Android
3. 5 In 1 Mobile maamusha
Maamulaha ciyaarta mobilada wuxuu ku siinayaa faa iidada isku mar jarista, ujeeddada, dhaqaaqida, iyo toogashada kaliya adoo adeegsanaya farta calaamadaha si aad u xakameyso badhanka. Kontaroolahan moobiilku wuxuu suulkaaga ka sii daynayaa dhibaatada haysashada wax xakameyn dheeraad ah.
Tan ka sokow, waxay la timid taageere qaboojiye horumarsan oo caqli badan iyo batari ku dhex jira 400mAh oo waxtar u leh hoos u dhigida heerkulka taleefannada casriga ah isla mar ahaantaana lagu dalaco taleefanka casriga ah.
Kharashka taleefanka casriga ah oo hoos u dhiga heerkulkiisa
5 1 nidaamka xakamaynta
Xoogaa yar oo taabasho ah
Waa xakameeyaha ciyaaraha wireless-ka wuxuuna ku habboon yahay qalabka dhegaha ee Android, Windows, iyo VR. Waxay ku siinaysaa waayo-aragnimo aad u fiican oo ciyaaraha ah. Waxay la socotaa ilaa 20 saacadood oo batteri ah, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon kalfadhiyada masaafada dheer.
Xiriirkeeda 2.4Ghz wuxuu kuu xaqiijinayaa eber lagaa rabaa, taas oo aan waligeed kuu oggolaan doonin inaad ku lumiso qoryahaaga ciyaarta.
Si heer sare ah ayaa loo dhisay
Ma taageeri macruufka
5. EasySMX Qabasho
EasySMX Grip xakameeyaha moobiilka wuxuu ku siinayaa fudayd sidaad u maamusho wuxuuna beddelaa fiilooyinka mobilada leh ee siligga ah iyo kuwa waaweyn ee aan fududayn in la maareeyo. Kontroller-ka mobilkaani wuxuu ku siinayaa xajin dheeri ah wuxuuna kiciyaa waxyaabaha kiciya taleefankaaga casriga ah.
Waxa kale oo ku jira marawaxad qaboojiye ah si aad uga ilaaliso taleefankaaga kuleylka badan.
Khibradda ciyaaraha ugu dambeeya
Immisa ayey Faa'iido Leh Yihiin Maamulayaasha Mobilada ee COD?
In kasta oo lagu ciyaaro ciyaaro taleefannada casriga ahi sidoo kale waa wax xiiso leh oo waxaad ku ciyaari kartaa ciyaaraha aad jeceshahay meel kasta. Taleefannada casriga ahi wax badan ayey ka beddeleen adduunka ciyaaraha. Ku ciyaarista toogashada iyo ciyaaraha kale ee heerka sare ah uma baahna PC ama laptop dambe. Waad soo dejisan kartaa iyaga oo waxaad u ciyaari kartaa si aan joogsi lahayn.
Taas cagsigeeda, inaad kulan ku dhigto taleefannada gacanta waxay noqon kartaa wax yar oo jahwareer ah laba sababood awgood. Midka koowaad ayaa ah in shaashadaha taleefannada casriga ahi leeyihiin meel kooban, marka labaadna, uma adeegsan kartid kontaroolada shaashadda taabashada si wax ku ool ah.
Si looga hortago dhibaatooyinka noocan oo kale ah, ilaaliyeyaasha moobiilku waxay noqon karaan xulashada kuugu fiican adiga oo ah ciyaar jecel. Haddii aad taageere u tahay CoD, markaa ka dib taleefankaaga oo aad kula ciyaarto kumbuyuutarka gacanta ayaa kaa caawin doona inaad la kulanto jilicsanaan iyo xiise badan. Intaa waxaa sii dheer, koontaroolaha mobilada ayaa kordhiya fursadaha guuleysiga maadaama ay aad u fududdahay in la boodo, la dhuuqo, la dhaqaajiyo, oo la toogto.
Erayada Ugu Dambeeya:
Maamulayaasha mobilada ayaa badalay ciyaarta ku saabsan mobilada. Ciyaaraha sida Wicitaanka Waajibaadka ayaa aad ugu badan in lagu ciyaaro taleefannada casriga ah iyadoo la adeegsanayo kontoroolka gacanta. Shaashadda yar iyo xakamaynta shaashadda xaddidan kama sii careysiin doonto adiga oo ciyaaraya.
Isticmaalka kontoroolka moobiilku kaliya kaa caawin maayo inaad sare u qaaddo khibradaada madadaalo iyo madadaalo leh, laakiin sidoo kale waxay kordhisaa fursadaha guuleysiga adoo ku kordhinaya xawaarahaaga badhamada xakamaynta fudud.
Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinay kugu filan si aad u hesho xakamaynta moobiilka ugu fiican ee COD adiga oo ku siinaya falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan kantaroolayaasha moobiilka iyo ku darista labada shey ee ugu fiican qodobka kor ku xusan.
Xeerarka Promo Roblox & Wiki
Sidee loo Helaa Dab Bilaash ah PC?
movies download hd bilaash online
app Alexa daaqado 8
123movies derbi weyn movie buuxa
xubin Ra'iisul lacag la'aan ah ardayda
liiska boggaga qulqulka bilaashka ah
kaararka hadiyadaha lacag la'aanta ah